Tsika Wristbands, Metal Mari, Tsika Yakashongedzwa Zvimedu - SJJ
Iine saiti yekugadzira pamusoro pe64,000 mativi metres uye vanopfuura 2500 vane ruzivo vashandi, pamwe neazvino otomatiki electroplating chirimwa uye yakapfava enamel kara yekupa michina, isu tinodarika vakwikwidzi vedu mukushanda kwakanyanya, nyanzvi, kutendeseka uye kugona kwazvo chigadzirwa mhando, kunyanya kune yakawanda yakawanda inodikanwa munguva pfupi kana magadzirirwo akaomeswa aida vashandi vane ruzivo. Yakazvitsaurira kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vedu vane ruzivo vashandi vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona kuzere kwevatengi kugutsikana.
Vakomana Scouts veAmerica
2021 / Nyamavhuvhu
2021 / Chikunguru
Ungade here kugadzira mamwe emhando yepamusoro masimbi kune ako accessories? Ndokumbirawo uuye ubatane nesu, Pretty Shiny Zvipo zvinozadzisa chishuwo chedu uye nekuunza pfungwa yako muhupenyu chaihwo. Isu takapa zvakakura zvakavhurwa dhizaini yeyakapenderedzwa mitsipa, zvishongo zvishongo, zvipfuyo zvemhuka, chishongo cheKisimusi kuti iwe ...